ပေကျင်းမြို့တွင် မောင်းသူမဲ့ယာဉ် ပထမဆုံး စီးပွားဖြစ် စမ်းသပ်မှု စတင်ကြောင်းကြေညာ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တော်၌ ပထမဆုံးသော စီးပွားဖြစ် မောင်းသူမဲ့မော်တော်ယာဉ် စမ်းသပ် မောင်းနှင်မှု ကို စတင်ခဲ့ပြီး ဆက်စပ်ေသာစီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒများကို ယခုသီတင်းပတ် အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း မြို့တော်၏ အဆင့်မြင့် မောင်းသူမဲ့ သရုပ်ပြဇုန်ရုံးမှ သိရသည်။
စီမံခန့်ခွဲရေးမူဝါဒ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ရလဒ်ကောင်းများရရှိလျက် မောင်းသူမဲ့မော်တော်ယာဥ်စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှု ခရီးမိုင်ပေါင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ယခုနှစ် ဧပြီလမှစတင်၍ ကီလိုမီတာ ၃ သန်းနီးပါး အထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ရုံးအကြီးအကဲ Kong Lei က ပြောကြားခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ် စမ်းသပ်မှုဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေများ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Baidu နှင့် Pony.ai တို့သည် မောင်းသူမဲ့မော်တော်ယာဉ် ရှေ့ပြေးဝန်ဆောင်မှုများကို စတင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည့် ပထမဆုံးသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီများသည် ပေကျင်းမြို့ရှိ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၆၀ ကျယ်ဝန်းသော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်တွင် မောင်းသူမဲ့ကားအစီးရေ ၁၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုမူဝါဒများအရ ယင်းကုမ္ပဏီများသည် ဝန်ဆောင်မှုမပေးခြင်းမပြုမီ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းစံံနှုန်းများနှင့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို ခရီးသည်များအား အသိပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆင့်မြင့် မောင်းသူမဲ့သရုပ်ပြဇုန်သည် အများပြည်သူ ခရီးသွားလာရေး ဝန်ဆောင်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် စမ်းသပ်ဧရိယာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Kong က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#ပေကျင်း #မောင်းသူမဲ့ယာဉ် #ဆင်ဟွာ #Beijing #SelfDrivingVehicle #Xinhua #Myanmar #XinhuaMyanmar
BEIJING, Nov. 27 (Xinhua) — The Chinese capital of Beijing launched its first commercial trial of autonomous driving and rolled out relevant management policies earlier this week, according to the city’s high-level autonomous driving demonstration zone office.
Baidu,aChinese tech giant, and Pony.ai were the first companies authorized to launch the pilot services. They will put no more than 100 autonomous vehicles into service in the city’s economic development zone covering 60 square km.
The high-level autonomous driving demonstration zone will expand the trial areas in due time so as to upgrade the travel service for the public, said Kong. Enditem